Qaramada Midoobay oo mawqif adag iska taagtay xadhigii Roobow iyo dilkii shacabka Baydhabo, Dawlada Federaalkana qoraal u dirtay. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Qaramada Midoobay oo mawqif adag iska taagtay xadhigii Roobow iyo dilkii shacabka Baydhabo, Dawlada Federaalkana qoraal u dirtay.
Qaramada Midoobay oo mawqif adag iska taagtay xadhigii Roobow iyo dilkii shacabka Baydhabo, Dawlada Federaalkana qoraal u dirtay.
Muqdisho (somalilandmirror.com) –Wakiilka xoghayaha guud ee QM ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa qoraal xasaasi oo ka dhan ah habkii loo fuliyey xadhiga Mukhtaar Roobow iyo dadkii lagu dilay Baydhaba u diray dowladda Soomaaliya, isaga oo ka wkaiil ah beesha caalamka.
Qoraalka oo ku socda wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay gaysteen xadgudubyo ka dhan xeerarka xuquuqda aadanaha QM, islamarkaana maadaama QM ay bixiso mushaharka ciidamada qeyb ka mid ah, ay qasab tahay inay arrintan jawaab u raadiso.
Waxaa qoraalka lagu sheegay in xadgudubyada ay ciidama gaysteen ay ka mid tahay dilka 15 qof oo shacab ah kuwaas oo ayaga oo dibad-baxaya lagu dilay magaalada Baydhaba 13-kii iyo 14-kii December, ayna jiraan caddeymo muujinaya xadgudubyadaas.
Waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku lifaaqay qoraal kale oo ay usoo direen Midowga Yurub, iyo dalalka Jarmalka iyo UK, oo taagerada kala laabtay booliska Koonfur Galbeed, sababo al xidhiidha falalkii ay ku kaceen. Saddexdan dhinac ayaa qeyb ka ah barnaamij lagu taageero booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo loogu magac daray JPP (Joint police Program).
Haysom ayaa qoraalkiisa ku sheegay in caddaymaha la hayo ay muujinayaan in xadhiga Roobow ay fuliyeen ciidamada NISA oo taageero ka helaya kuwa Itoobiya.
Waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in wasaaradda amniga gudaha ay xadhiga Roobow sabab uga dhigtay inuu hub gaynayey magaalada Baydhaba, sidoo kalena abaabulayey maleeshiyo.
Haysom ayaa yidhi “Waa eedyemo culus, haddii ay jiraan balse dowladda wax dambi ah weli kuma soo oogin Roobow, ayada oo xeerka dambiyada dalka Soomaaliya uu dhigayo in eedaysanaha dacwad lagu soo oogo mudd 48 saac gudahood ah ama la sii daayo”
Waxa uu sioo kale qoraalkiisa ku yidhi in inkasta oo dowladda ay ku eedeysay Roobow inuu jebiyey heshiiskii cafiska loogu fidiyey markii uu isa soo dhiibay, haddana Soomaaliya maysan lahayn xeer cafis.
Previous PostHogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Oo Ka Digay Cawaaqib Xumada Ka Dhalan Karta Haddii Mareykanku Ka Baxo Heshiiska Ay Wada Galeen. Next PostDeg Deg: Liiska xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka Puntland oo lagu dhawaaqay.